काठमाडौँमा बेचिने म:म बारे ७ अनौठा तथ्य, जुन तपाईंलाई थाहा नहुन सक्छ !::Nepal's Online News Portal
काठमाडौँ – तपाईं हामीले खुब मीठो मानेर खाने परिकार हो म:म । बफ, चिकेन, मटन, भेज, पनीर लगायतका धेरै स्वादमा पाइने म:म र त्यसमा पनि काठमाडौँमा बेचिने म:मका बारेमा केहि तथ्य तपाईंलाई थाहा नहुन सक्छ। स्टिम मम, फ्राइड मम, सी मम लगायत विभिन्न भेराइटीमा पाइने ममका बारेमा हाम्रो अनुसन्धानले अनौठा केहि तथ्यहरु भेटेका छौँ ।
६. काठमाडौँमा बेचिने मम मध्ये सबैभन्दा ठुलो मम र बाक्लो अचार कोटेश्वरको शिखर ममको हो । काठमाडौँमा सानदार मम, बोता मम लगायत केहि चर्चित मम सेन्टरहरुपनि छन् । रेष्टुरेन्टमा सबैभन्दा बढी अर्डर गरिने परिकारपनि मम हो । काठमाडौँमा मम बेच्न मात्र अरवौंको लगानी भएको छ ।